नपड्नेलाई ठुलो दशा लाग्नेछ , सात दिनभित्रमा तपाईंले सोचेको काम बन्नेछ ।बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नु होला। – Paluwa Khabar
नपड्नेलाई ठुलो दशा लाग्नेछ , सात दिनभित्रमा तपाईंले सोचेको काम बन्नेछ ।बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नु होला।
भाद्र २०, २०७८ आइतबार 30
यो साता यी राशि हुने हरु हुँदैछन् मालामाल? भदौ १९ गतेदेखी भदौ २५ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल हेर्नुहोस्
यो साता यी राशि हुनेहरु हुँदैछन् मालामाल? भदौ १९ गतेदेखी भदौ २५ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल हेर्नुहोस्
मेषः साताको प्रारम्भमा आर्थिक क्षेत्रमा सामान्य समस्या आईपर्नेछ । देश परदेशको यात्राको सम्भाबना रहनेछ । गरीरहेको कार्यमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुनाले कार्य ढिलाईको सम्भाबना रहनेछ । स्वास्थका क्षेत्रमा सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । नयाँ लगानि गर्नका निम्ती बिशेष सजग रहनु पर्ने समय रहेकोछ । मगंलबार पश्चात भने कार्य क्षेत्रबाट आफन्तजनहरुको मनजित्न सफल रहिनेछ । सामान्य पारीवारिक समस्याको सामना गर्नु पर्नेछ ।
ब्यापार ब्यवसायमा हानिको सम्भाबना रहेकोले साबधानि पूर्बक अघि बढ्नुहोला । अध्ययन अध्यापनमा समय मध्यम रहनेछ । साताको अन्त्यतिर भने सभासम्मेलनमा सरीकहुने अवसर प्राप्त रहनेछ । कला कौलशताको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । योसाता आर्थिक क्षेत्रमा साबधानि रहनु होला ।
साताको अन्त्यतिर भने स्थीर क्षेत्रमा गरीएको लगानिको उत्तम प्रतिफल प्राप्त रहनेछ । पारीवारिक साथ सहयोगमा अधुराकार्य सम्पादनमा सहजता उत्पन्न हुनेछ । योसाता कार्यक्षेत्रमा लगाईएको लगनशिलताको कदर हुनेछ ।
मिथुनः साताको प्रारम्भमा सामान्य अप्रिय खबरले मन चिन्तीत तुल्याउनेछ । गरीरहेको कार्य सम्पादनमा अधिक समय ब्यतति रहनेछ साथै कार्य सम्पादनको श्रेय समेत अन्य ब्यतिहरुले प्राप्त गर्नेछन् । भौतिक श्रोतसाधनको प्रयोग तथा खरिदको योग रहेकोछ । मान्यजनहरु पक्षमा देखापर्ने सम्भाबना रहेकोछ । मगंलबार पश्चातभने नयाँकार्यको थालनिले मन हर्षित रहेनछ । पुराना मित्रजनहरुको सहयोगमा आर्थिक क्षेत्र दरीलो बनाउन मद्दत पूग्नेछ । पठनपाठनमा लगाईएको समय महत्वपुर्ण रहनेछ । बिद्धान बर्गहरु सगँ समय बिताउने अवसर प्राप्त रहनेछ ।
आफुभन्दा साना सगँमनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । साताको अन्त्यतिर अनावश्यक खर्चका कारण तात्कालिन आर्थीक अभाबको सामना गर्नुपर्नेछ । नयाँ कार्यमा साबधानि अपनाउनुनै राम्रो रहनेछ ।
कर्कटः यात्राकारक समय रहेकोछ । मित्रजनहरुको प्रशन्नताका निम्ती अधिक समय ब्यतित रहनेछ । कामकाजका क्षेत्रमा सामान्य सङ्घर्षका बावजुद पदोन्नतीको सम्भाबना रहनेछ । मुद्दामामिलामा फस्नुपरेता पनि विजय आफ्नै हुनेछ । पुरानो लगानि उठाउन भने समय मध्यम रहनेछ । सभासम्मेलन जन्यकार्यमा सहभागीता जनाउने अवसर प्राप्त रहनेछ । भुमि तथा बाहान शुख प्राप्त रहनेछ । पारीवारिक मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ ।
सबारीसाधनको प्रयोगमा साबधानि अपनाउनु पर्नेछ । साताको अन्त्य तिर आर्थिक क्षेत्र सबल तुल्याउन नयाँ कार्यको थालनिको योग रहेकोछ । अध्ययन अध्यापनमा समय उत्तम रहनेछ । योसाता कार्यप्रति लगनशिल रहे निकै लाभ प्राप्त रहनेछ ।
साताको अन्त्य तिर गरीरहेको कार्यका कारण आफन्तजनहरु सगँ सामान्य नराम्रो अवस्था उत्पन्न हुन सक्नेछ । सामान्य अप्रिय खबरले मन चिन्तीत गराउन सक्नेछ । यो साता अरुको बिश्वासमा नपरी कार्य सन्चालन गर्नु उत्तम रहेनछ ।
साताको अन्त्यतिर मित्रजनहरु सगँको सहकार्यमा नयाँ कार्यको थालनि भएतापनि त्यसको प्रतिफलभने त्यति उत्तम प्राप्त हुने छैन । सामान्य यात्रा पश्चात मान्यजनहरु सग भेटहुनेछ साथै आम्दानिका श्रोत सबल तुल्याउने उपाय समेत प्राप्त रहनेछ ।
साताको अन्त्यतिरभने नजिकका मित्रजनहरुले धो का दिनाले गरीरहेको कार्यमा ढिलाईके सम्भाबना रहनेछ । सामान्य चो ट पटकको सामना गर्नुपर्ने सम्भाबना रहेकोले बिशेष साबधानि अपनाउनु पर्नेछ । योसाताको अन्त्यतिर नयाँ कार्यको थालनि नगर्नु उत्तम रहनेछ ।
साताको अन्त्यतिर शारिरीक आलस्यताका कारण कार्य सम्पादनमा बिलम्व रहनेछ । पारीवारिक सहमति नहुँदा केही घरायसी विषयका कारण विवाद उत्पन्न हुन सक्नेछ । प्रेममा भने प्रगाढता छाउनेछ । योसाता आफ्नो कला कौशलका माध्यमबाट आम्दानि मजबुत बनाउने समय रहेकोछ ।
साताको अन्त्यतिर देशबिदेशको यात्राको योग रहेकोछ । अधुराकार्यहरु सम्पादन गर्न समयले साथ दिनेछ । सामाजिक कार्यमा जुट्ने उत्तम समय रहेकोछ । यो साता पारीवारका निम्ती खर्चिएको समय उत्तम रहनेछ ।
सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सहभागीताको अवसरप्राप्त रहनेछ । उत्तम रहनेछ । आम्दानीका श्रोतहरु सामान्य परीर्वतनको सम्भाबना रहेकोछ योसाता मनमा घमण्डलाइ उत्पन्न हुन नदिनु होला ।
साताको अन्त्यतिर पारीवारिक झोर झमेलाको सामना गर्नु पर्नेछ । मानसम्मानामा आँच आउन सक्ने सम्भाबना रहेकोले गरररिहेको कार्यका क्षेत्रमा साबधानि अपनाउनु होला । योसाता साथिभाईहरुको साथसहयोगमा अधुराकार्य हरु सम्पादन गर्न उत्तम रहनेछ ।
साताको अन्त्यतिर साथिभाईहरुको साथसहयोगमा अधुराकार्यहरु सम्पादित रहनेछन् । मान्यजनहरु सग सामान्य मनमुटाबको सम्भाबना रहनेछ । योसाता नयाँलगानिमा
Prevपाथिभरा माताले सबैको रक्षा गरुन, भाद्र २० गते आईतबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
रवि लामिछानेको ग्यालेक्सी टिभीमा प्रयोग गरिने फोरके प्रविधि के हो ? थाहा पाउनुहोस्
गर्भवती लिएर हिँडेको एम्बुलेन्सलाई बाघले घेरेपछि